အငှားမယား (သို့) မြန်မာမိန်းကလေးများအတွက် နောက်ဆုံးပေါ် ထောင်ချောက် - HARTHANANTAW
အသားဖြူဖြူနှင့် ငယ်ရွယ်ပျိုမျစ်သည့် အလှတရားများအား ပိုင်ဆိုင်ထားသူ အသက် ၂၂ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးတစ်ဦး သူ၏မျက်နှာပေါ်တွင် တန်ဖိုးအသင့်အတင့်ရှိသည့် မိတ်ကပ်ကို လိမ်းခြယ်ထားပြီး ကြက်သွေးရောင် နှုတ်ခမ်းနီကို ခပ်စိုစိုကလေး ဆိုးထားသည်။
ကျောလယ်လောက်အထိရှိသည့် ဆံပင်မှာ ဖြောင့်စင်းလျက် သူဆင်ယင်ထားသော အဝတ်အစားမှာ မြန်မာဆန်ဆန် ရင်ဖုံးလက်ပြတ်နှင့် စည်းလုံချည်လေးဖြစ် သည် ။ သို့သော် သူ လက်ရှိ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုနေရသည်မှာ အမျိုးသားတစ်ဦးနှင့် တရားဝင် လက်ထပ်ထားခြင်းမရှိဘဲ ရက်ရှည်ကြာ ပေါင်းသင်းနေရသည့် အငှားမိန်းမဘဝ ဖြစ်နေသည်ဆိုခြင်းကို မည်သူ ယုံနိုင်ပါ မည်နည်း …?
”ကျွန်မ ဒီအလုပ်ကို လက်ခံတာ နှစ်ကြိမ်ရှိပြီ။ ပထမလက်ခံတဲ့လူက အသက် ၃ဝ ကျော်ပဲရှိတယ်။ သူက သဘောကောင်းတော့ နောက်တစ်ယောက်ကိုပါ ထပ်လက်ခံလိုက်တာ”ဟု မဇာခြည်(အမည်လွှဲ)က ပြော သည် …။
သူလက်ခံသည်ဆိုသည့်အလုပ်မှာ အမျိုးသားတစ်ဦးနှင့် တိုက်ခန်းတစ်ခန်းတွင် တစ်လတန်သည်၊ နှစ်လတန်သည် အတူနေပေးရသည့် အငှားမယားဟု ဆိုရမည်ဖြစ်သည် ။ ပြည့်တန်ဆာများကို ညည့် ငှက်၊ သွေးသားဈေးသယ်၊ ဇယား၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကို အခကြေး ငွေယူ၍ ဖျော်ဖြေသူ အစရှိသဖြင့် ခေါ်ကြပြီး ထိုစကားလုံးများထက် နူးညံ့စွာ ဖြစ်ပေါ်လာသော စကားမှာ အငှားမယားပင် ဖြစ်လေတော့ သည် …။
လှိုင်မြို့နယ်အတွင်း သန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာ ပြင်ဆင်ထားသော လေးထပ်တိုက်ခန်း တစ်ခုမှာ မဇာခြည်တစ်ယောက် သူ့ကို ခေါ် ဆောင်ထားသူနှင့် အတူနေရခြင်းဖြစ်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်၏အမြင်မှာမူ လင်မယားဟုပင် သိထားကြဟန် ရှိသည် …။
မဇာခြည်မှာ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး စလင်းမြို့နယ်မှ ရန်ကုန်မြို့သို့ လာရောက်၍ အထည်ချုပ်စက်ရုံ တစ်ရုံတွင် လေးနှစ်နီးပါး အလုပ် လုပ်ကိုင်နေသူ တစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူသည် မိသားစု စားဝတ်နေရေး အခြေအနေ ကြောင့် ဆယ်တန်းအထိသာ ပညာဆည်းပူးခဲ့ရပြီး ညီအစ်မဝမ်းကွဲ ၏ အကူအညီဖြင့် ရွှေပြည်သာမြို့နယ်ရှိ အထည်ချုပ်စက်ရုံ တစ်ရုံတွင် ပထမဆုံး ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် …။
သို့သော် ၎င်းရရှိသည့်လစာကို မိသားစုထံ ပြန်မပို့နိုင်ရုံသာ မက အဆောင်လခ၊ ဝမ်းစာနှင့်ပင် လုံးလည်လိုက်နေသောကြောင့် အဝတ်အထည်ကိုပင် လူတန်းစေ့ ဝတ်ဆင်နိုင်ရန် မနည်းရုန်းကန် ရသည်ဟု ဆိုသည်။ ”အထည်ချုပ်မှာ လုပ်တုန်းကဆို ဇက်ကြောတွေက တက်၊ ခွဲတမ်းမပြီးရင် Leader တွက အော်ဟစ်ပြီးဆဲတော့တာ။ တစ်လကို ဝင်ဝင်ချင်းတုန်းက ခုနစ်သောင်း၊ နောက်နှစ်တွေကျမှ တစ်သိန်း လောက်ပဲရတာ၊ ပင် ပန်းသလောက် လစာမရခဲ့ဘူး”ဟု သူရပ်တည်ခဲ့ရပုံကို ပြောပြသည် …။
အဆိုပါစက်ရုံတွင် ရိုးရိုးသားသား လုပ်ကိုင်စားသောက်ရာမှ ယခုကဲ့သို့ ဘဝမျိုးထဲတွင် ကျင်လည်တတ်ရန် ခေါ်ဆောင်ပေးခဲ့သူမှာ အတူအလုပ် လုပ်နေသည့် ဝန်ထမ်းထဲမှ အမျိုးသမီးတစ်ဦး ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ယင်းက ”အလုပ်ထဲက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ယောက်ျားနဲ့မိန်းမဖြစ်တာ ဘာဆန်းလဲ …?
ဒီမှာပဲ ဆက်ပြီး အလုပ်လုပ်နေရင် ဘာမှဖြစ်မလာ ဘူး။ နင်က ရုပ်လှတော့ သူက(ငှားရမ်းသည့်လူ) အတည်တကျတောင် လက်ထပ်ချင် လက်ထပ်မှာဆိုတာနဲ့ ဒီအလုပ်ကို လုပ်ဖြစ်သွားတာပါ”ဟုဆိုသည်။ ပထမဆုံး လက်ခံခဲ့သည့် အမျိုးသားက စက်ရုံတစ်ခုတွင် မန်နေဂျာအဆင့်ရှိကာ သူ့ကို ခရေပင်လမ်းခွဲသို့ လာရောက်ခေါ် ဆောင်ပြီး မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်းတစ်ခုတွင် အတူနေထိုင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ထိုစဉ်အခါကလည်း တိုက်ခန်းငှားရမ်းစဉ်က လင် မယားဟု ပြောကြားထားဟန်ရှိကြောင်း သူက ဆက်လက်ပြောပြသည် …။
အငှားမယားအဖြစ် စတင်နေပေးချိန်က ပထမဆုံးလစာအနေဖြင့် တစ်လငါးသိန်းပေးပြီး စားသောက်စရိတ်၊ မီတာခ၊ စုစု ပေါင်း ငါးသိန်းပေးထားကြောင်း၊ အသုံးစရိတ်မှာ ငါးသိန်းအထိ မကုန်လျှင် ပိုသည့်ငွေ ကို ပြန်မယူတော့ဘဲ သူ့ကိုပေးတတ်ကြောင်း သိရသည်။ ယခုငှားရမ်းသည်ကို လက်ခံသည့်အခါတွင်မူ သူ့မှာ အပျိုမစစ်တော့သောကြောင့် တစ်လသုံးသိန်းသာ ရတော့ပြီး အဆို ပါအမျိုးသားထံ လာရောက်သည့် သူငယ်ချင်းများကိုပါ ဧည့်ခံပေးရကြောင်း သူကဆိုသည် …။
”သူ အရက်သောက်မယ်ဆို အရက်ငှဲ့ပေးရတယ်။ နင်းပေး၊ နှိပ်ပေးရတယ်။ သူက မြစ်သာဘက်ကလို့ ပြောတယ်။ ဒီမှာကြာကြာ မနေရဘူး။ သင်္ဘော ပြန် တက်ရမှာနဲ့ အိမ်ပြန်ဖို့လဲ အဆင်မပြေလို့ ခုလိုပဲ အိမ်ငှားပြီး မိန်းမပါ အငှားယူတာလို့ ပြောတယ်”ဟု မဇာ ခြည်က ခပ်ပေါ့ပေါ့ ဆိုပြန်သေးသည် …။
မဇာခြည်ကဲ့သို့ပင် တချို့စက်ရုံဝန်ထမ်းသမလေးများသည် သင်္ဘော သား၊ စက်ရုံ၊ ကုမ္ပဏီများမှ ရာထူးအဆင့်တစ်ခု ရှိနေသူ များနှင့် အငှားမယားအဖြစ် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုနေကြသလို တချို့ အိမ်အကူများနှင့် ပြည့်တန်ဆာများသည်လည်း နိုင်ငံ ခြားသားများနှင့် အတူနေထိုင် ကာ ထိုအလုပ်မျိုး လုပ်ကိုင်နေကြ ကြောင်း သိရသည် …။
ပြည်တွင်း၌ လာရောက်ဖွင့်လှစ်သည့် နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများမှ နိုင်ငံခြားသား သို့မဟုတ် စက်ရုံ၊ ကုမ္ပဏီများရှိ နိုင်ငံခြားသားအ များစုတွင် အငှားမယား မြန်မာမိန်းကလေးများ ရှိနေပြီး များသော အားဖြင့် ဂျပန်၊ တရုတ်၊ ကိုရီးယား အစရှိသည့် အာရှနိုင်ငံသားများက ပိုမိုငှားရမ်းကြောင်း သိရသည် …။
အထက်ဖော်ပြပါ အခြေအနေများထက် ပိုဆိုးသည့် အကြောင်း အရာတစ်ခုမှာ ချောမောလှပသည့် အမျိုးသမီးငယ်များကို လူမှုကွန် ရက်တွင် စတင်မိတ်ဆက်ပြီး ချစ်ကြိုက်လာသည့်အခါ လစာမပေးဘဲ အတူနေသည့် နိုင်ငံခြားသားများ၊ ကုမ္ပဏီများမှ အရာရှိများရှိ နေခြင်းဖြစ်သည် …။
”သူနဲ့ကျွန်မက We Chat မှာ တွေ့တာ။ အပြင်မှာ နှစ်ခါ ချိန်း တွေ့ပြီး သူက တိုက်ခန်းဝယ်ပြီး အတူနေဖို့ တောင်းဆိုတယ်။ အ ဆောင်မှာ စိတ်မချတော့ဘူး။ ဒါပေမဲ့ အခုလက်ထပ်ဖို့က အဆင် မပြေနိုင်သေးလို့ နောက်နှစ် လက်ထပ်မှာလို့လဲ ပြောခဲ့တာ”ဟု ကုမ္ပဏီတစ်ခု တွင် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သော ရှမ်းတရုတ် လူမျိုးတစ် ဦးနှင့် အတူနေထိုင်ခဲ့သူ မခိုင်ခိုင်(အမည်လွှဲ)က ပြောသည် …။
မခိုင်ခိုင်က အိမ်တွင် ၄င်းတို့နှစ်ယောက်စာ ချက်ပြုတ်စား သောက်ရန် တစ်လ ငါးသိန်းပေးပြီး စတင်နေထိုင်စဉ်က ငွေကျပ် ၁ဝ သိန်းကိုလည်း သီးသန့်စုဆောင်းရန်ဟုဆိုကာ ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အတူနေပြီး ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင် ထိုသူမှာ အလွန်ဇီဇာကြောင်ပြီး အိမ်အတွင်း ဖုန်တစ်မှုန်တင်တာ တွေ့သည်ဆို သည်နှင့် ကြိမ်းမောင်းပြောဆိုတတ်ကြောင်း၊ သူ နေမကောင်းဖြစ်လျှင်လည်း ဂရုမစိုက်သည့်အပြင် အိမ် တွင် သူ့ကိုထားခဲ့ကာ ဟိုတယ်၌ တစ်ယောက်တည်း သွားရောက် တည်းခိုနေတတ်ကြောင်း သူက ဆက်ပြောပြသည် …။
“သူ ကျွန်မကိုချစ်လို့ အတူနေနေတာလို့ပဲ ထင်ခဲ့တာ။ နောက် ပိုင်း သူ့လုပ်ရပ်တွေကို ကြည့် ပြီးတော့ တဖြည်းဖြည်း ရိပ်မိလာတယ်။ လက်ထဲမှာ သီးသန့်အပ်ထားတဲ့ငွေကိုလဲ အလုပ်မှာ ပိုတိုး အောင် လုပ်ပေးမယ်။ ရလာတဲ့အမြတ်ကို မင်းပဲရမှာဆိုပြီး ပြန် တောင်းတယ် …။
နောက်ပြီး သူ့အလုပ်က ဝန်ထမ်းထဲ က အရမ်းတော်တဲ့ ကောင်မလေးဆိုပြီး မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဆီကို ညတိုင်း ဖုန်းဆက်တယ်။ မေးရင်လဲ နောက်တာလို့ပဲ ပြန်ဖြေတယ်။ သူ့ဖုန်းကို ပေးမကြည့်ဘူး”ဟု မခိုင်ခိုင်က ရင်ဖွင့်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ယင်းအမျိုးသား၌ မယားကြီးရှိပြီး ထိုအမျိုး သမီးမှာ ၎င်းတို့၏ နိုင်ငံခြားရုံးခွဲ၌ ဦးဆောင်လျက်ရှိကြောင်းကို ဖွင့်ဟပြောဆိုလာသည် …။
”သူက လူပျိုပါဆိုပြီး ပြောခဲ့တာ။ သူ့မှာ အိမ်ထောင်ရှိမှန်း မသိခဲ့ဘူး။ နောက်ပိုင်းမှ သူကိုယ်တိုင် ဖွင့်ပြောပြီး ပထမအိမ်ထောင်ကို ကွာပေးမယ်။ နှစ်နှစ်လောက် ထပ်စောင့်ပါတဲ့။ဘယ်လိုလုပ် ဖြစ်နိုင်မှာလဲ။ သူ တကယ်ယူမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ကျွန်မ ခံစားလာရတယ်။ အမေ့ကို လှမ်းတိုင်ပင်တော့ တရားတွေဘာတွေလဲ စွဲမနေနဲ့ တစ်ရှက်ကနေ နှစ်ရှက်ဖြစ်ရမှာတဲ့”ဟု သူကပြောသည်။
ထို့ကြောင့် သူ၏ဘဝမှာ ဆုပ်လည်းစူး၊ စားလည်းရူးဆိုသလို အငှားမယားဆန်ဆန် ဖြစ်နေသော်လည်း တစ်ဖက်လှည့် ခံနေရသည်ကို သိသိကြီးနှင့် မည်သည့်တုံ့ပြန်မှုမှ မလုပ်နိုင်သည့် အနေအထားသို့ ရောက်ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။လက်ရှိတွင် သူ၏ ဇာတိဖြစ်သော ဟိုပုံးမြို့သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ရန်ကုန်မြို့တွင်း၌ ရှိနေသည့် အငှားမယား အများစုသည် နယ်အသီးသီးမှ အိမ်အကူအဖြစ် လာရောက်လုပ်ကိုင်ရာမှ ထိုဘဝကို ရောက်ရှိ သွားခြင်းဖြစ်ပြီး တချို့စက်ရုံများမှ ယင်းကဲ့သို့ ဖြစ်လာ သူများကိုမူ ပတ်ဝန်းကျင်မှ အနည်းအကျင်းမျှသာ သိနေကြသည် …။
အဆိုပါ မိန်းကလေးအများစုသည် အသက် ၂ဝ နှင့် ၃ဝ ကြား ဆင်းရဲသည့် မိန်းကလေး များဖြစ်ကြပြီး မိသားစု စားဝတ်နေရေးအ တွက်ကြောင့်သာ ယခုကဲ့သို့ ဇာတ်မြှုပ်လိုက်ကြရခြင်း ဖြစ်သည်။ပညာမတတ်သူများကို အိမ်အကူဆိုသော်လည်း လစာကောင်းသည်ဟု သိမ်းသွင်းခဲ့သူများမှာ မိမိတို့အကျိုးအမြတ်ကိုသာ ရှေးရှုသည့် အိမ်ဖော်ပွဲစားများဖြစ်ပြီး လက်ခံခဲ့သော အိမ်အကူများအ နေဖြင့် အလုပ်ရှင် နိုင် ငံခြားသားများမှ အနိုင်အထက်၊ အဓမ္မပြုမှု ခံရသည့်အခါ ဆင်းရဲလွန်းသဖြင့် မငြင်းသာတော့ဘဲ သဘောတူလိုက်ရခြင်းများရှိကြောင်း သိရသည်။ ထိုဖြစ်စဉ်များသည် လူကုန်ကူးမှု တားဆီးနှိမ်နင်းရေး အက်ဥပဒေနှင့် ငြိစွန်းလျက်ရှိသည် …။
လူကုန်ကူးမှု တားဆီးကာကွယ်ရေးဥပဒေ (၅/၂ဝဝ၅) အခန်း (၁)၊ အပုဒ် (၃)အရ လူတစ်ဦးကို သူ၏သဘောတူညီချက်ရှိသည်ဖြစ် စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ ခေါင်းပုံဖြတ်ရန်အလို့ငှာ သိမ်းသွင်း စုဆောင်း ခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ လွှဲပြောင်းရောင်းချ၊ ဝယ်ယူငှားရမ်း ခြင်း၊ ခိုလှုံခွင့်ပေးခြင်းတို့မှာ လူကုန်ကူးမှု မြောက်သည်။ ”တိုင်လို့ရတယ်ဆိုတော့လဲ ကျွန်မတို့အတွက်က ဘာမှမထူး တော့ဘူး။ ဒီအလုပ် က ဝင်ငွေလဲကောင်းနေတာပဲ။ အငှားမယား မလုပ်နဲ့ဆိုရင် ဘယ်သူက ဘယ်လိုတာဝန်ယူပေးမလဲပေါ့။ ဆင်းရဲ တွင်းထဲမှာ နေတာထက်စာရင် မထူးဇာတ်ပဲ ဆက်ခင်းပါရစေတော့” ဟု မဇာခြည်က မဲ့ပြုံးပြုံး၍ ပြော သည် …။
သူတို့လို မိန်းမသားများအား မိသားစု စီးပွားရေးအခြေအနေ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းနှင့် ဝင်ငွေနည်းပါးခြင်းများက လမ်း ကြောင်းအမှားတစ်ခုသို့ တွန်းပို့လိုက်သောကြောင့် ယခုလို လိင် ကျေးကျွန်ဘဝ သို့ ရောက်ရှိလာရခြင်း ဖြစ်သည်။ အငှားမယားများအနေဖြင့် ပြည့်တန်ဆာလိုပင် ဥပဒေအကာအကွယ်မဲ့သော၊ အန္တရာယ်များလွန်းသည့် တရားမဝင် အလုပ်တစ်ခုကို စီးပွားရေး အဆင်မပြေနိုင်သေးသမျှ အခြားရွေးချယ်စရာ မရှိသူများအတွက် ထို ဘဝမျိုးဖြင့်သာ ဆက်လက်ကျင်လည်နေရဦး မည်ဖြစ်သည် …။
အငှားမယား (သို့) မွနျမာမိနျးကလေးမြားအတှကျ နောကျဆုံးပျေါ ထောငျခြောကျ
အသားဖွူဖွူနှငျ့ ငယျရှယျပြိုမဈြသညျ့ အလှတရားမြားအား ပိုငျဆိုငျထားသူ အသကျ ၂၂ နှဈအရှယျ မိနျးကလေးတဈဦး သူ၏မကျြနှာပျေါတှငျ တနျဖိုးအသငျ့အတငျ့ရှိသညျ့ မိတျကပျကို လိမျးခွယျထားပွီး ကွကျသှေးရောငျ နှုတျခမျးနီကို ခပျစိုစိုကလေး ဆိုးထားသညျ။
ကြောလယျလောကျအထိရှိသညျ့ ဆံပငျမှာ ဖွောငျ့စငျးလကျြ သူဆငျယငျထားသော အဝတျအစားမှာ မွနျမာဆနျဆနျ ရငျဖုံးလကျပွတျနှငျ့ စညျးလုံခညျြလေးဖွဈ သညျ ။ သို့သျော သူ လကျရှိ အသကျမှေးဝမျးကြောငျး ပွုနရေသညျမှာ အမြိုးသားတဈဦးနှငျ့ တရားဝငျ လကျထပျထားခွငျးမရှိဘဲ ရကျရှညျကွာ ပေါငျးသငျးနရေသညျ့ အငှားမိနျးမဘဝ ဖွဈနသေညျဆိုခွငျးကို မညျသူ ယုံနိုငျပါ မညျနညျး …?
”ကြှနျမ ဒီအလုပျကို လကျခံတာ နှဈကွိမျရှိပွီ။ ပထမလကျခံတဲ့လူက အသကျ ၃ဝ ကြျောပဲရှိတယျ။ သူက သဘောကောငျးတော့ နောကျတဈယောကျကိုပါ ထပျလကျခံလိုကျတာ”ဟု မဇာခွညျ(အမညျလှဲ)က ပွော သညျ …။
သူလကျခံသညျဆိုသညျ့အလုပျမှာ အမြိုးသားတဈဦးနှငျ့ တိုကျခနျးတဈခနျးတှငျ တဈလတနျသညျ၊ နှဈလတနျသညျ အတူနပေေးရသညျ့ အငှားမယားဟု ဆိုရမညျဖွဈသညျ ။ ပွညျ့တနျဆာမြားကို ညညျ့ ငှကျ၊ သှေးသားစြေးသယျ၊ ဇယား၊ လိငျပိုငျးဆိုငျရာကို အခကွေး ငှယေူ၍ ဖြျောဖွသေူ အစရှိသဖွငျ့ ချေါကွပွီး ထိုစကားလုံးမြားထကျ နူးညံ့စှာ ဖွဈပျေါလာသော စကားမှာ အငှားမယားပငျ ဖွဈလတေော့ သညျ …။
လှိုငျမွို့နယျအတှငျး သနျ့ရှငျးသပျရပျစှာ ပွငျဆငျထားသော လေးထပျတိုကျခနျး တဈခုမှာ မဇာခွညျတဈယောကျ သူ့ကို ချေါ ဆောငျထားသူနှငျ့ အတူနရေခွငျးဖွဈပွီး ပတျဝနျးကငျြ၏အမွငျမှာမူ လငျမယားဟုပငျ သိထားကွဟနျ ရှိသညျ …။
မဇာခွညျမှာ မကှေးတိုငျးဒသေကွီး စလငျးမွို့နယျမှ ရနျကုနျမွို့သို့ လာရောကျ၍ အထညျခြုပျစကျရုံ တဈရုံတှငျ လေးနှဈနီးပါး အလုပျ လုပျကိုငျနသေူ တဈဦးဖွဈသညျ။ သူသညျ မိသားစု စားဝတျနရေေး အခွအေနေ ကွောငျ့ ဆယျတနျးအထိသာ ပညာဆညျးပူးခဲ့ရပွီး ညီအဈမဝမျးကှဲ ၏ အကူအညီဖွငျ့ ရှပွေညျသာမွို့နယျရှိ အထညျခြုပျစကျရုံ တဈရုံတှငျ ပထမဆုံး ဝငျရောကျလုပျကိုငျခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ …။
သို့သျော ၎င်းငျးရရှိသညျ့လစာကို မိသားစုထံ ပွနျမပို့နိုငျရုံသာ မက အဆောငျလခ၊ ဝမျးစာနှငျ့ပငျ လုံးလညျလိုကျနသေောကွောငျ့ အဝတျအထညျကိုပငျ လူတနျးစေ့ ဝတျဆငျနိုငျရနျ မနညျးရုနျးကနျ ရသညျဟု ဆိုသညျ။ ”အထညျခြုပျမှာ လုပျတုနျးကဆို ဇကျကွောတှကေ တကျ၊ ခှဲတမျးမပွီးရငျ Leader တှက အျောဟဈပွီးဆဲတော့တာ။ တဈလကို ဝငျဝငျခငျြးတုနျးက ခုနဈသောငျး၊ နောကျနှဈတှကေမြှ တဈသိနျး လောကျပဲရတာ၊ ပငျ ပနျးသလောကျ လစာမရခဲ့ဘူး”ဟု သူရပျတညျခဲ့ရပုံကို ပွောပွသညျ …။
အဆိုပါစကျရုံတှငျ ရိုးရိုးသားသား လုပျကိုငျစားသောကျရာမှ ယခုကဲ့သို့ ဘဝမြိုးထဲတှငျ ကငျြလညျတတျရနျ ချေါဆောငျပေးခဲ့သူမှာ အတူအလုပျ လုပျနသေညျ့ ဝနျထမျးထဲမှ အမြိုးသမီးတဈဦး ဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ ယငျးက ”အလုပျထဲက သူငယျခငျြးတဈယောကျက ယောကျြားနဲ့မိနျးမဖွဈတာ ဘာဆနျးလဲ …?
ဒီမှာပဲ ဆကျပွီး အလုပျလုပျနရေငျ ဘာမှဖွဈမလာ ဘူး။ နငျက ရုပျလှတော့ သူက(ငှားရမျးသညျ့လူ) အတညျတကတြောငျ လကျထပျခငျြ လကျထပျမှာဆိုတာနဲ့ ဒီအလုပျကို လုပျဖွဈသှားတာပါ”ဟုဆိုသညျ။ ပထမဆုံး လကျခံခဲ့သညျ့ အမြိုးသားက စကျရုံတဈခုတှငျ မနျနဂြောအဆငျ့ရှိကာ သူ့ကို ခရပေငျလမျးခှဲသို့ လာရောကျချေါ ဆောငျပွီး မရမျးကုနျးမွို့နယျရှိ တိုကျခနျးတဈခုတှငျ အတူနထေိုငျခဲ့ကွခွငျးဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ထိုစဉျအခါကလညျး တိုကျခနျးငှားရမျးစဉျက လငျ မယားဟု ပွောကွားထားဟနျရှိကွောငျး သူက ဆကျလကျပွောပွသညျ …။
အငှားမယားအဖွဈ စတငျနပေေးခြိနျက ပထမဆုံးလစာအနဖွေငျ့ တဈလငါးသိနျးပေးပွီး စားသောကျစရိတျ၊ မီတာခ၊ စုစု ပေါငျး ငါးသိနျးပေးထားကွောငျး၊ အသုံးစရိတျမှာ ငါးသိနျးအထိ မကုနျလြှငျ ပိုသညျ့ငှေ ကို ပွနျမယူတော့ဘဲ သူ့ကိုပေးတတျကွောငျး သိရသညျ။ ယခုငှားရမျးသညျကို လကျခံသညျ့အခါတှငျမူ သူ့မှာ အပြိုမစဈတော့သောကွောငျ့ တဈလသုံးသိနျးသာ ရတော့ပွီး အဆို ပါအမြိုးသားထံ လာရောကျသညျ့ သူငယျခငျြးမြားကိုပါ ဧညျ့ခံပေးရကွောငျး သူကဆိုသညျ …။
”သူ အရကျသောကျမယျဆို အရကျငှဲ့ပေးရတယျ။ နငျးပေး၊ နှိပျပေးရတယျ။ သူက မွဈသာဘကျကလို့ ပွောတယျ။ ဒီမှာကွာကွာ မနရေဘူး။ သင်ျဘော ပွနျ တကျရမှာနဲ့ အိမျပွနျဖို့လဲ အဆငျမပွလေို့ ခုလိုပဲ အိမျငှားပွီး မိနျးမပါ အငှားယူတာလို့ ပွောတယျ”ဟု မဇာ ခွညျက ခပျပေါ့ပေါ့ ဆိုပွနျသေးသညျ …။
မဇာခွညျကဲ့သို့ပငျ တခြို့စကျရုံဝနျထမျးသမလေးမြားသညျ သင်ျဘော သား၊ စကျရုံ၊ ကုမ်ပဏီမြားမှ ရာထူးအဆငျ့တဈခု ရှိနသေူ မြားနှငျ့ အငှားမယားအဖွဈ အသကျမှေးဝမျးကြောငျး ပွုနကွေသလို တခြို့ အိမျအကူမြားနှငျ့ ပွညျ့တနျဆာမြားသညျလညျး နိုငျငံ ခွားသားမြားနှငျ့ အတူနထေိုငျ ကာ ထိုအလုပျမြိုး လုပျကိုငျနကွေ ကွောငျး သိရသညျ …။
ပွညျတှငျး၌ လာရောကျဖှငျ့လှဈသညျ့ နိုငျငံခွားကုမ်ပဏီမြားမှ နိုငျငံခွားသား သို့မဟုတျ စကျရုံ၊ ကုမ်ပဏီမြားရှိ နိုငျငံခွားသားအ မြားစုတှငျ အငှားမယား မွနျမာမိနျးကလေးမြား ရှိနပွေီး မြားသော အားဖွငျ့ ဂပြနျ၊ တရုတျ၊ ကိုရီးယား အစရှိသညျ့ အာရှနိုငျငံသားမြားက ပိုမိုငှားရမျးကွောငျး သိရသညျ …။
အထကျဖျောပွပါ အခွအေနမြေားထကျ ပိုဆိုးသညျ့ အကွောငျး အရာတဈခုမှာ ခြောမောလှပသညျ့ အမြိုးသမီးငယျမြားကို လူမှုကှနျ ရကျတှငျ စတငျမိတျဆကျပွီး ခဈြကွိုကျလာသညျ့အခါ လစာမပေးဘဲ အတူနသေညျ့ နိုငျငံခွားသားမြား၊ ကုမ်ပဏီမြားမှ အရာရှိမြားရှိ နခွေငျးဖွဈသညျ …။
”သူနဲ့ကြှနျမက We Chat မှာ တှတေ့ာ။ အပွငျမှာ နှဈခါ ခြိနျး တှပွေီ့း သူက တိုကျခနျးဝယျပွီး အတူနဖေို့ တောငျးဆိုတယျ။ အ ဆောငျမှာ စိတျမခတြော့ဘူး။ ဒါပမေဲ့ အခုလကျထပျဖို့က အဆငျ မပွနေိုငျသေးလို့ နောကျနှဈ လကျထပျမှာလို့လဲ ပွောခဲ့တာ”ဟု ကုမ်ပဏီတဈခု တှငျ ဒါရိုကျတာအဖှဲ့ဝငျဖွဈသော ရှမျးတရုတျ လူမြိုးတဈ ဦးနှငျ့ အတူနထေိုငျခဲ့သူ မခိုငျခိုငျ(အမညျလှဲ)က ပွောသညျ …။
မခိုငျခိုငျက အိမျတှငျ ၄ငျးတို့နှဈယောကျစာ ခကျြပွုတျစား သောကျရနျ တဈလ ငါးသိနျးပေးပွီး စတငျနထေိုငျစဉျက ငှကေပျြ ၁ဝ သိနျးကိုလညျး သီးသနျ့စုဆောငျးရနျဟုဆိုကာ ပေးခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။ အတူနပွေီး ရကျအနညျးငယျအကွာတှငျ ထိုသူမှာ အလှနျဇီဇာကွောငျပွီး အိမျအတှငျး ဖုနျတဈမှုနျတငျတာ တှသေ့ညျဆို သညျနှငျ့ ကွိမျးမောငျးပွောဆိုတတျကွောငျး၊ သူ နမေကောငျးဖွဈလြှငျလညျး ဂရုမစိုကျသညျ့အပွငျ အိမျ တှငျ သူ့ကိုထားခဲ့ကာ ဟိုတယျ၌ တဈယောကျတညျး သှားရောကျ တညျးခိုနတေတျကွောငျး သူက ဆကျပွောပွသညျ …။
“သူ ကြှနျမကိုခဈြလို့ အတူနနေတောလို့ပဲ ထငျခဲ့တာ။ နောကျ ပိုငျး သူ့လုပျရပျတှကေို ကွညျ့ ပွီးတော့ တဖွညျးဖွညျး ရိပျမိလာတယျ။ လကျထဲမှာ သီးသနျ့အပျထားတဲ့ငှကေိုလဲ အလုပျမှာ ပိုတိုး အောငျ လုပျပေးမယျ။ ရလာတဲ့အမွတျကို မငျးပဲရမှာဆိုပွီး ပွနျ တောငျးတယျ …။
နောကျပွီး သူ့အလုပျက ဝနျထမျးထဲ က အရမျးတျောတဲ့ ကောငျမလေးဆိုပွီး မိနျးကလေးတဈယောကျဆီကို ညတိုငျး ဖုနျးဆကျတယျ။ မေးရငျလဲ နောကျတာလို့ပဲ ပွနျဖွတေယျ။ သူ့ဖုနျးကို ပေးမကွညျ့ဘူး”ဟု မခိုငျခိုငျက ရငျဖှငျ့သညျ။ နောကျပိုငျးတှငျ ယငျးအမြိုးသား၌ မယားကွီးရှိပွီး ထိုအမြိုး သမီးမှာ ၎င်းငျးတို့၏ နိုငျငံခွားရုံးခှဲ၌ ဦးဆောငျလကျြရှိကွောငျးကို ဖှငျ့ဟပွောဆိုလာသညျ …။
”သူက လူပြိုပါဆိုပွီး ပွောခဲ့တာ။ သူ့မှာ အိမျထောငျရှိမှနျး မသိခဲ့ဘူး။ နောကျပိုငျးမှ သူကိုယျတိုငျ ဖှငျ့ပွောပွီး ပထမအိမျထောငျကို ကှာပေးမယျ။ နှဈနှဈလောကျ ထပျစောငျ့ပါတဲ့။ဘယျလိုလုပျ ဖွဈနိုငျမှာလဲ။ သူ တကယျယူမှာ မဟုတျဘူးလို့ ကြှနျမ ခံစားလာရတယျ။ အမကေို့ လှမျးတိုငျပငျတော့ တရားတှဘောတှလေဲ စှဲမနနေဲ့ တဈရှကျကနေ နှဈရှကျဖွဈရမှာတဲ့”ဟု သူကပွောသညျ။
ထို့ကွောငျ့ သူ၏ဘဝမှာ ဆုပျလညျးစူး၊ စားလညျးရူးဆိုသလို အငှားမယားဆနျဆနျ ဖွဈနသေျောလညျး တဈဖကျလှညျ့ ခံနရေသညျကို သိသိကွီးနှငျ့ မညျသညျ့တုံ့ပွနျမှုမှ မလုပျနိုငျသညျ့ အနအေထားသို့ ရောကျရှိနခွေငျးဖွဈသညျ။လကျရှိတှငျ သူ၏ ဇာတိဖွဈသော ဟိုပုံးမွို့သို့ ပွနျလညျရောကျရှိသှားပွီဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ ရနျကုနျမွို့တှငျး၌ ရှိနသေညျ့ အငှားမယား အမြားစုသညျ နယျအသီးသီးမှ အိမျအကူအဖွဈ လာရောကျလုပျကိုငျရာမှ ထိုဘဝကို ရောကျရှိ သှားခွငျးဖွဈပွီး တခြို့စကျရုံမြားမှ ယငျးကဲ့သို့ ဖွဈလာ သူမြားကိုမူ ပတျဝနျးကငျြမှ အနညျးအကငျြးမြှသာ သိနကွေသညျ …။
အဆိုပါ မိနျးကလေးအမြားစုသညျ အသကျ ၂ဝ နှငျ့ ၃ဝ ကွား ဆငျးရဲသညျ့ မိနျးကလေး မြားဖွဈကွပွီး မိသားစု စားဝတျနရေေးအ တှကျကွောငျ့သာ ယခုကဲ့သို့ ဇာတျမွှုပျလိုကျကွရခွငျး ဖွဈသညျ။ပညာမတတျသူမြားကို အိမျအကူဆိုသျောလညျး လစာကောငျးသညျဟု သိမျးသှငျးခဲ့သူမြားမှာ မိမိတို့အကြိုးအမွတျကိုသာ ရှေးရှုသညျ့ အိမျဖျောပှဲစားမြားဖွဈပွီး လကျခံခဲ့သော အိမျအကူမြားအ နဖွေငျ့ အလုပျရှငျ နိုငျ ငံခွားသားမြားမှ အနိုငျအထကျ၊ အဓမ်မပွုမှု ခံရသညျ့အခါ ဆငျးရဲလှနျးသဖွငျ့ မငွငျးသာတော့ဘဲ သဘောတူလိုကျရခွငျးမြားရှိကွောငျး သိရသညျ။ ထိုဖွဈစဉျမြားသညျ လူကုနျကူးမှု တားဆီးနှိမျနငျးရေး အကျဥပဒနှေငျ့ ငွိစှနျးလကျြရှိသညျ …။
လူကုနျကူးမှု တားဆီးကာကှယျရေးဥပဒေ (၅/၂ဝဝ၅) အခနျး (၁)၊ အပုဒျ (၃)အရ လူတဈဦးကို သူ၏သဘောတူညီခကျြရှိသညျဖွဈ စေ၊ မရှိသညျဖွဈစေ ခေါငျးပုံဖွတျရနျအလို့ငှာ သိမျးသှငျး စုဆောငျး ခွငျး၊ သယျယူပို့ဆောငျခွငျး၊ လှဲပွောငျးရောငျးခြ၊ ဝယျယူငှားရမျး ခွငျး၊ ခိုလှုံခှငျ့ပေးခွငျးတို့မှာ လူကုနျကူးမှု မွောကျသညျ။ ”တိုငျလို့ရတယျဆိုတော့လဲ ကြှနျမတို့အတှကျက ဘာမှမထူး တော့ဘူး။ ဒီအလုပျ က ဝငျငှလေဲကောငျးနတောပဲ။ အငှားမယား မလုပျနဲ့ဆိုရငျ ဘယျသူက ဘယျလိုတာဝနျယူပေးမလဲပေါ့။ ဆငျးရဲ တှငျးထဲမှာ နတောထကျစာရငျ မထူးဇာတျပဲ ဆကျခငျးပါရစတေော့” ဟု မဇာခွညျက မဲ့ပွုံးပွုံး၍ ပွော သညျ …။
သူတို့လို မိနျးမသားမြားအား မိသားစု စီးပှားရေးအခွအေနေ၊ အလုပျအကိုငျ အခှငျ့အလမျးနှငျ့ ဝငျငှနေညျးပါးခွငျးမြားက လမျး ကွောငျးအမှားတဈခုသို့ တှနျးပို့လိုကျသောကွောငျ့ ယခုလို လိငျ ကြေးကြှနျဘဝ သို့ ရောကျရှိလာရခွငျး ဖွဈသညျ။ အငှားမယားမြားအနဖွေငျ့ ပွညျ့တနျဆာလိုပငျ ဥပဒအေကာအကှယျမဲ့သော၊ အန်တရာယျမြားလှနျးသညျ့ တရားမဝငျ အလုပျတဈခုကို စီးပှားရေး အဆငျမပွနေိုငျသေးသမြှ အခွားရှေးခယျြစရာ မရှိသူမြားအတှကျ ထို ဘဝမြိုးဖွငျ့သာ ဆကျလကျကငျြလညျနရေဦး မညျဖွဈသညျ …။
Categories Select Category Astrology (2) Digital Camera Reviews (7) Funny (3) Health (5) International News (2) Knowledge (7) Local News (13) Photography (11) Relationship (1) Up to date (3)